Eeyaha Dunida waa degel ay iska leedahay AB Internetka, kaas oo maalin kasta tan iyo 2011 aan kugula socodsiinno noocyada cannooyinka ugu caansan iyo kuwa aan sidaa u caan bixin, daryeelka mid kasta oo ka mid ahi u baahan yahay, iyo, haddii aysan intaas ku filnayn, waxaan waxay ku siinayaan talooyin badan si aad ugu raaxeysatid wehelkaaga afarta lugood leh aad iyo aad u wanaagsan.
Kooxda tifaftirka ee Mundo Perros waxay ka kooban tahay koox jecel eyga runta ah, kuwaas oo kula talin doona markasta oo aad u baahatid markasta oo aad su'aalo ka qabtid daryeelka iyo / ama dayactirka xayawaankan saaxiibtinimada leh oo loo tixgeliyey mid ka mid ah saaxiibbada ugu wanaagsan ee aadanaha. Haddii aad xiisaynayso inaad nala shaqayso, buuxi foomka soo socda waana kula soo xiriiri doonaa.
Eeyadu waa xayawaan aan waligay aad u jeclaa. Waxaan nasiib u yeeshay inaan dhowr la noolaado noloshayda oo dhan, had iyo jeerna, munaasabadaha oo dhan, waayo-aragnimadu waxay ahayd mid aan la iloobi karin. Sannado la qaadashada xayawaanka noocan oo kale ah waxay kuu keeni kartaa oo keliya waxyaabo wanaagsan, maxaa yeelay waxay ku siinayaan kalgacal iyagoon waxba ka dalban soo celin.
Ma aha Cherry
Qof aad u jecel xayawaannada iyo eeyaha waaweyn sida xoodhadhka, waa inaan dego inaan ka arko meel fog maxaa yeelay waxaan ku noolahay guri aad u yar. Fan eeyaha sida Sir Didymus iyo Ambrosius ama Kavik, eyga yeyda. Saaxiibkay naftaydu waa eeyga buuraha Bernese ee la yiraahdo Papabertie.
Tan iyo markii aan lix sano jiray waxaan lahaa ey. Waxaan jeclahay inaan nolosha la wadaago waxaanan had iyo jeer isku dayaa inaan naftayda la socodsiiyo si aan u siiyo tayada nolosha ugu fiican. Taasi waa sababta aan u jeclahay caawinta dadka kale ee, sida aniga oo kale, ogaada in eeyadu ay muhiim yihiin, waa mas'uuliyad ay tahay inaan daryeelno oo noloshoodana ugu faraxno sida ugu macquulsan.
Waxaan had iyo jeer ku soo koray hareeraha xayawaanka sida bisadaha Siamese iyo gaar ahaan eyda, oo kala jinsiyad iyo kala duwan ah. Waxay yihiin shirkadda ugu fiican ee jiri karta! Marka mid waliba wuxuu kugu martiqaadayaa inaad ogaato tayadooda, tababarkooda iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin. Adduun xiiso leh oo ka buuxa jacayl aan xad lahayn iyo wax kaloo badan oo adiguna ay tahay inaad ogaato maalin kasta.
Anigu waxaan ahay qof aad u jecel eyda oo waxaan samatabbixin jiray oo daryeeli jiray tan iyo markii aan xirtay xafaayadaha. Runtii waan jeclahay jinsiyadaha, laakiin iskama hor istaagi karo muuqaalka iyo tilmaamaha mestizos, ee aan nolol maalmeedkayga la wadaago.
Waxaan iskaa wax u qabso ku ahaa hoyga muddo sanado ah, hadda waa inaan waqtigayga oo dhan u hibeeyaa eeyo ii gaar ah, oo aan yareyn. Waan jeclahay xayawaankan, waana ku raaxaystaa inaan waqti la qaato.
Baraha canine, tababaraha shaqsiyeed iyo kariye eeyaha ku saleysan Seville, waxaan xiriir weyn oo shucuur leh la leeyahay adduunka eeyaha, tan iyo markii aan ka imid qoys tababarayaal ah, ilaaliyayaal iyo xirfadlayaal xirfadlayaal ah, jiilal dhowr ah. Eeyadu waa hamidayda iyo shaqadayda. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waan ku farxi doonaa inaan ku caawiyo, adiga iyo eeygaaga.